Hexagonal Wire Mesh, Screw Nail, Galvanized Concrete Nail - YouYou
Nail vy vy
Fantsika mahazatra tariby
Nail vy tsy misy loha
Fantsika lamba rongony nandrisika
Fantsika elo tafo tampon-trano
Square Wire harato
Stainless Steel Wire harato
Wire Cut Straight
Wire antsy mainty
Volavola fandavahana tena
Miorina Mafy tamin'ny 1989, YouYou (Group) Metaly manome lanja lehibe ny fanitarana sy ny fanavaozana ny kalitaon'ny vokatra sy ny fitaovana. Efa nandroso sary an-trano tariby, fanaovana fantsika, galvanisation, fitsaboana hafanana, fitsaboana ambony sy fitaovana fiarovana ny tontolo iainana, izay mahafeno ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana nasionaly ary indrindra amin'ny fantsika simenitra.
Ny vokatra lehibe dia misy fantsika vy mainty, fantsika beton, fantsika tariby mahazatra, fantsika tafo, visy gypsum, visy chipborad, tariby nandrisika, tariby misy annealed mainty, tariby mifono pvc, tariby misy rojo, tariby misy hareza, tariby tsy misy fangarony, machete fary ary karazan-tariby isan-karazany, sns Varotra am-bolo eraky ny firenena, 70% ny vokatra aondrana any amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, toa an'i Eropa, Amerika, Afrika, Moyen Orient ary Azia atsimo atsinanana, sns.
Ny mpiasa rehetra ao amin'ny YouYou (Group) Metals amin'ny taona 2020 dia miezaka ny hahatratra ny tanjona 600 tapitrisa yuan isan-taona ny lanja famoahana isan-taona ao anatin'ny telo taona miaraka amin'ny fanantenana sy fientanam-po.
Visy vita amin'ny solaitrabe
Ahoana ny fisafidianana visy maina
Ny studs DRYWALL dia nanjary tsy majika sy avo kokoa amin'ny fiainantsika isan'andro. Nampiasain'izy ireo tamin'ny fanamboarana trano sy haitao kilasy ambony, fa izy ireo koa ankehitriny dia iray amin'ireo fitaovana fananganana be mpampiasa indrindra, ohatra, mila manamboatra zavatra amin'ny fiainantsika isan'andro isika. Amin'ny entana raikitra alohan'ny hanaovantsika n ...
Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia mitohy, ny tsipika galvanized tato anatin'ny taona vitsivitsy dia manana fivoarana vaovao, Galvanized tsipika ny fisian'ny rafitra fanarenana hafanana fako, ary amin'ny andalana famokarana sasany. Ny lafaoro fametahana miaraka amina fantsom-pamokarana tsy mivantana, ny solika nodoran'ny fantsom-pamirapiratra dia ...
Fomba famokarana hoho
Ny fizotry ny famokarana ny hoho dia ny fanaovana sary, ny lohateny mangatsiaka, ny famolahana ary ny dingana hafa. Ny akora famokarana nohomboana dia kapila, izany hoe ny kapila vy, aorian'ny fanaovana tariby, esory ny savaivon'ny Nail Rod, ary avy eo aorian'ny lohateny mangatsiaka, rambon'ny hoho sy tendrony, ary avy eo poloney, izay no vita ...
Tips - Vokatra asongadina - Sitemap - Toerana finday